Iingxoxo zeqela: Iingcaciso, iintlobo kunye neengcebiso
Kubafundi nabazali Imisebenzi Yoshishino
I-Ins ne-Outs of Interviews yeqela
Udliwano-ndlebe weqela, ngamanye amaxesha obizwa ngokuba ngudliwano-ndlebe, luhluke kunonxibelelwano ngonxibelelwano olulodwa kuba luqhutywa ngabantu bonke. Oku kunokubangela ukwesatshiswa kunokuba udliwano-ndlebe lwendabuko ngenxa yokuba kukho abantu abangakumbi ekamelweni lokuthabatha. Isiphambili sokuphumelela ukwazi ukuba ungalindela ntoni kwintetho yodliwano-ndlebe. Oku kuya kunceda ukuvuselela iingxaki zakho kwaye kukukuncede uqonde ukuba kutheni iinkampani zisebenzisa le ngxoxo kunye neli lilindelekile kuwe.
Iidliwano-ndlebe zamaqela ngamanye amaxesha zisetyenziselwa iikomiti ezamkelwayo xa uxoxwa nomviwa ochaphazelekayo. Ezinye iikhampani nazo zisebenzisa i-intanethi yodliwano-ndlebe ukucima abaviwa. Kule nqaku, siza kujonga ngokugqithiseleyo ekugqibeleni kwaye sihlolisise iintlobo zeengxoxo zodliwano-ndlebe, izizathu zokuba iinkampani zisebenzisa i-intanethi yodliwano-ndlebe, kunye neengcebiso zokuphumelela kwi-intanethi ye-intanethi.
Iintlobo zamaqela abadliwano-ndlebe
Izinto zokuqala ofuna ukuzazi malunga neengxoxo zentlanganiso yile ndlebe kukuba kukho ezimbini iintlobo ezisisiseko zeengxoxo zentetho:
I-Candidate Group Udliwano-ndlebe - Kwintlanganiso yodliwano-ndlebe lwabaviwa, uya kufakwa kwiqela kunye nabanye abafake izicelo. Kwiimeko ezininzi, aba bafake izicelo baya kufaka isicelo esifanayo. Ngexesha le-interview yeqela labaviwa, ngokuqinisekileyo uya kucelwa ukuba uphulaphule ulwazi malunga nenkampani kunye nesimo, kwaye unokucelwa ukuba uphendule imibuzo okanye uthathe inxaxheba kwimisebenzi yeqela. Olu hlobo lwentetho yodliwano-ndlebe aluqhelekanga.
Iqela lePhaneli Udliwano-ndlebe - Kwintlanganiso yodliwano-dliwano-ndlebe, oluxhomekeke ngakumbi kunomdlali weqela labaviwa, uya kuxoxwa ngabanye ngephaneli labantu ababini okanye ngaphezulu. Olu hlobo ludliwano-dliwano lwamaqela luphantse luba ngumbuzo kwaye uphendule iseshoni, kodwa unokucelwa ukuba uthathe inxaxheba kwindlela ethile yokuzivocavoca okanye ukuvavanya okufana neemeko zakho zokusebenza.
Kutheni amaNkampani asebenzisa i-Group Interviews
Inani elinyukayo leenkampani zisebenzisa i-intanethi yodliwano-ndlebe ukucima abafaki-sicelo. Olu tshintsho lunokuthi lubekwe ngumnqweno wokunciphisa umvuzo kunye nokuba iqela liba luleke ngakumbi kwindawo yokusebenzela, kodwa indlela elula ukuyichaza kukuba iintloko ezimbini zihlala zingcono kunezinye. Xa kukho umntu ongaphezu komnye owenza intluli-ndlebe, amathuba okuqeshwa okubi ayenziwe ayancitshiswa.
Kwi-intanethi yodliwano-ndlebe, ngamnye udliwano-ndlebe uza kukhangeleka izinto kwizindlu ngendlela eyahlukileyo aze eze nemibuzo eyahlukileyo kwitafile. Ngokomzekelo, ochwepheshe bezakhono zoluntu unokukwazi okuninzi ngokuqesha, ukuqhuma, ukuqeqesha kunye neenzuzo, kodwa umphathi wesebe uya kuba nokuqonda okungcono imisebenzi yemihla ngemihla oya kucelwa ukuba uyenze xa ufumana msebenzi. Ukuba bobabini babantu bepaneli, baya kukubuza iintlobo ezahlukeneyo zeemibuzo.
Yintoni oya kuVavanywa ngayo kwiNgxoxo yeqela
Abaphandli beqela bajonge izinto ezifanayo nabanye abaphandlebe abafuna. Bafuna ukubona umgqatswa oqinileyo owaziyo ukusebenzisana kakuhle nabanye kwaye aziphathe kakuhle nangokufanelekileyo kwimimandla yomsebenzi. Izinto ezicacileyo ukuba iqela labaphandabuli bahlolisise:
Ukubonakala kwakho. Izambatho, ucoceko, kunye nantoni na into ehambelana nesimo sakho somzimba siya kugwetywa. Ukuba unxibe ukhenketho oluninzi okanye i-cologne, ubuncinci omnye wabathengululi baya kuphawula. Ukuba ukhohliwe ukubeka idayodorant okanye ukufanisa amasokisi akho, ubuncinci omnye wabathengululi uya kuphawula. Funda kabanzi malunga nendlela yokugqoka ngayo udliwano-ndlebe.
Zakhono Zakho Zokunikezela. Abaceli-ndlebe baya kuhlawula ngokukhethekileyo indlela ozenza ngayo. Ingaba unqabile? Ngaba unxibelelwano lwamehlo xa uthetha? Ngaba ukhumbula ukuxhaphaza izandla nabantu bonke kwigumbi? Qaphela ngolwimi lomzimba kunye noko lithethayo ngawe ngexesha lodliwano-ndlebe.
Izakhono zakho zokunxibelelana. Kungakhathaliseki ukuba uluhlobo luni lomsebenzi owenza isicelo, kuya kufuneka ukwazi ukuthetha. Izakhono ezicacileyo ukuba iqela lababathengi-ndlebe lifuna ukuphulaphula, landela imiyalelo uze ufumane iingcamango zakho.
Umdla wakho. Ukususela ngelixa udliwano-dliwano luqala ukuba luphelile, abaphandi-ndlebe baya kuzama ukuvavanya ukuba unomdla onjani kulo msebenzi owenzayo. Ukuba ubonakala utyhafile kwaye uchithekile ngexesha ludliwano-ndlebe, mhlawumbi uya kudluliselwa omnye umntu.
Iingcebiso Zokukunceda Iqela Lenu Udliwano-nxaxheba
Ukulungiselela kuyisitshixo ekuphumeleleni naluphi na udliwano-ndlebe, kodwa oku kuyinyaniso ngokukhethekileyo kwiintliwano-ndlebe zeqela. Ukuba wenza nayiphi na impazamo, ubuncinci omnye wabathengululi bakho uya kuphawula. Nazi izicwangciso ezimbalwa eziya kukunceda wenze okulungileyo kunokwenzeka:
Bulisani bonke abaceli-ndlebe bakho ngabanye. Khangela ubuso, nithi, kwaye xa kunokwenzeka ukuxhaphaza izandla.
Musa ukugxila kumntu ngamnye. Kufuneka wenze umgudu wokubandakanya wonke umntu kwiqela xa ucela okanye uphendula imibuzo.
Ungabonakali okanye ukhathazeke xa ujongene nentetho yodliwano-ndlebe.
Lungiselela intetho yodliwano-ndlebe ngokwenza uluhlu lwemibuzo yodliwano-ndlebe onokuyicelwa kwaye uyenze indlela ongaphendula ngayo.
Ukuba uthenduliwe nabanye abaviwa kuncono ukukhokela kunokulandela. Abadliwano-ndlebe bangakukhumbuli ukuba udibanisa kwimvelaphi. Funda indlela yokuba ngumqeshwa onyanzelekileyo.
Izakhono oza kulindeleka ukuba zibonise ngexesha lokuqhuba intetho yodliwano-ndlebe zibandakanya izakhono zobunkokeli, ukukwazi kwakho ukujongana noxinzelelo kunye noxinzelelo, izakhono zesebenzi kunye nendlela othabatha ngayo kunye nokugxeka. Qinisekisa ukugcina oku engqondweni xa ugqiba ukuqeqeshwa.
Ndiyabulela wonk 'ubani odibene nodliwano-ndlebe kwaye ukhumbule amagama kunye nezihloko ukwenzela ukuba ungathumela incwadi ebongwe ngokubulela inqaku emva koko.
Indlela yokubhala nokuFomathiza iSifundo seNkundla yeBhizinisi
2008 I-Ford F-150 i-Harley-Davidson Truck - Inqwelo yeTranskrit Limited